बनारसमा १५० महिला बन्धक, के हुँदैछ उद्धारको पहल ? | BARDIYA ONLINE |
प्रेम बुढा | प्रकाशित मिति: मङ्लबार, साउन १, २०७५ ।
रोजगारीका लागि विदेश हिँडेका १ सय ५० महिला भारतको बनारसमा ९ दिनदेखि बन्धक बनाइएको पाइएको छ । उनीहरु नथनियास्थित एउटा घरमा बन्धक बनाइएका हुन् ।
बन्धक बनाइएकामा बर्दियाका २ र अन्य पोखरा, ताप्लेजुङ लगायत पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाको रहेको बन्धकमा परेकी बर्दियाकी शारदा खड्काले बताईन् । भारत हुँदै अबैध बाटोमार्फत आषाढ २३ गते देखि कुबेत लगायत विभिन्न मुलकमा जान हिँडेका उनीहरुलाई दलालहरुले नै बन्धक बनाएका हुन् । बन्धक खड्काकी पति निमबहादुर खड्काले फोनमा कुरा गर्दा १५० महिला बन्धक बनाइएको खबर आएको बताए ।
खड्काले भने, ‘बाहिरबाट च्यानल गेटमा ताला लगाइएकाले राखिएको कुन ठाउँ हो भन्ने पत्ता लागेको छैन ।’ बन्धक हुनेमा १७ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरु रहेका छन् । बन्धकमा पर्नेमा बर्दियाकै मनमाया वि.क. पनि छिन् । उनीहरुलाई उद्धारका लागि माइती नेपालमार्फत पहल भइरहेको छ ।
को हुन् बन्धक बनाउने दलाल ?
१ सय ५० महिला बन्धक बनाउने काममा विभिन्न दलालहरु संलग्न भए पनि बर्दियाका महिलालाई सन्दीप बि.सी. शर्मा भनिने दलाल संलग्न रहेको पाइएको छ । उनी बाँकेको खजुरा जि गाँउ—२९ का हुन् । पूर्वतिरका महिलालाई भने उनले सन्दीप महतो परिचय दिइएको पाइएको छ ।
के गर्दैछ प्रशासन ?
बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले महिला बन्धक बनाइएको घटना पुष्टि गर्दै उद्धार प्रयास भइरहेको बताए। विपद व्यवस्थापनका लागि भारतमा बसेको नेपाल भारत बैठकमा पनि आफुहरुले यस विषयमा कुरा उठाएको कुरुम्बाङले बताए । भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने चासो देखाए पनि बन्धक बनाइएको ठाउँ पत्ता नलाग्दा समस्या भएको छ ।